Aiza no ariana ny sarontava: toro-hevitra sy kaontenera | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 05/05/2021 22:02 | fanodinana
Noho ny areti-mandringana manerantany vokatry ny coronavirus dia manana zava-misy vaovao iainantsika amin'ny sarontava isika. Sady sarontava, fonon-tànana ary gela famono otrikaretina no anisan'ny andavanandrontsika isan'andro. Ny ankamaroan'ireo vokatra ireo dia ilaina raha oharina amin'ny fisorohana ny viriosy. Saika fanary daholo izy ireo ary mety hanana fisalasalana amin'ny fomba mety indrindra hitantanana ny fako isika. Betsaka ny olona tsy mahalala aiza ny sarontava ariana ary miafara amin'ny fitantanana tsy mahomby izy ireo.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao hoe aiza no ariana ny saron-tava sy izay tokony hatao miaraka amin'izy ireo.
1 Izay atsipy ny sarontava
2 Mametraha fako areti-mandringana
3 Aiza ny sarontava ariana: inona no hatao amin'izy ireo
4 Fonon-tanana sy gel famonoana otrikaretina
Misy fako maro be noforonina avy tamin'ny fanasan-damba izay itoerantsika. Ny voalohany dia ny fampahafantarana ny mponina fa ny fonon-tànana sy ny sarontava dia tsy azo ariana amin'ny làlam-bahoaka na eny an-tsaha. Ilaina ny fanary ny fako ny tahirim-pako mifandraika amin'izany amin'ny fitantanana araka ny tokony ho izy. Ilaina izy ireo hiarovana ny fahasalamantsika fa tsy maintsy miaro ny fahasalaman'ny tontolo iainantsika koa isika. Ilaina ny fananana tontolo iainana mahasalama raha te hiaina tsara isika. Mety manana fisalasalana amin'ny fomba mety hitantanana ireo fako rehetra ireo isika. Ny Tetikasa Libera dia nateraky ny fifanekena nataon'i Ecoembes ary ny SEO / BirdLife dia nampandre ny fiparitahan'ny fako amin'ity karazana ity vokatry ny areti-mandringana.
Ny hany zavatra angatahina dia ny vahoaka mba hikarakara ny fahasalaman'ny planeta amin'ny alàlan'ny fisorohana ny famoahana fonon-tanana sy sarontava izay miafara amin'ny habaka voajanahary sy mandoto ny tontolo iainana. Ny fanadihadiana isan-karazany dia manamafy fa ny pathogens ary eo amin'izy ireo velona dia afaka mampiasa ny fako ho toy ny volo fanitarana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, arakaraka ny maha betsaka ny fako eo amin'ny tontolo iainana, dia azo inoana kokoa fa hiitatra any amin'ny toeran-kafa ireo loza ireo.
Mametraha fako areti-mandringana
Zava-dehibe ny fahafantarana hoe aiza no atsipy ny saron-tava, ankoatry ny fitaovana isan'andro ampiasainay amin'ity areti-mandringana ity. Ny torolàlana momba ny fitantanana ny fako mandritra ny toe-java-manahirana ara-pahasalamana ateraky ny COVID-19 dia fehezin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana amin'ny filaminana SND / 271/2020, navoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana ofisialy tamin'ny 22 martsa. Ny fonon-tanana sy ny sarontava dia tsy maintsy apetraka ao anaty fitoeram-pako, izay volondavenona na maitso miankina amin'ny tanàna misy antsika.. Io no fitoeran-javatra alehan'ny fako rehetra izay tsy manana kaontenera fanodinana manokana amin'ireo tanàna ireo izay tsy manana ny ampahan'ny voa.
Tsaroantsika fa misy toerana sasany izay ny sombiny voajanahary dia fitoeran-javatra misaraka sy miloko volontany. Amin'ity tranga ity dia ny fako biolojika toy ny fako ara-tsakafo sy ny fanetezana zaridaina ihany no tokony apetraka. Any amin'ny tanàna tsy misy kaontenera volontany ary fitoeram-birao ihany no misy azy, eto no ariana ny sarontava.
Ny famantarana ny fametrahana fako amin'ny areti-mifindra dia tsy mitovy amin'ny olona izay manohana ny quarantining dia fahefana mpisolovava ao an-trano noho ny fijaliana na noho ny fijerin'ny coronavirus. Ireo olona ireo dia tsy maintsy atokana ao anaty efitrano ary ny fako dia mifandray mivantana amin'ireo olona ireo na efa notanana. Noho izany dia tsy maintsy manana fitsaboana hafa ianao. Ny napkin dia tsy maintsy angonina ao anaty kitapo hita ao amin'ilay efitrano iray ihany ary akatona ary apetraka ao anaty kitapo faharoa. Ity kitapo ity dia miankina amin'ny varavaran'ny efitrano ary eo koa hametrahana fonon-tànana sy ny fitaovana ampiasain'ny olona mirona amin'ny marary. Ny kitapo faharoa dia azo akatona tsara ary afaka atao ao anaty fako izay mendrika ny adiresy ho an'ny fako ary ny zavatra rehetra dia atsipy ao anaty kaontenera fotsy na maitso.
Amin'ny toerana sasany izay misy tranga manokana amin'ny coronavirus koa Azo atao ny mamela ny kaontenera manokana ho an'ity karazana fako ity. Ao amin'ny trano fitaizana be antitra izay nisy fifantohana lehibe, ity karazana kaontenera manokana ity dia an'ny Isabelita hametraka ny fako amin'ny olona izay efa nanana COVID.
Aiza ny sarontava ariana: inona no hatao amin'izy ireo
Fantatsika fa ny sarontava dia efa tafiditra amin'ny fanaontsika andavanandro. Tsy maintsy atao ny mitondra azy ireo na aiza na aiza rehefa mivoaka amin'ny arabe isika. Tsy maninona raha afaka mifanaraka amin'ny halaviran'ny fiarovana napetraky ny minisiteran'ny fahasalamana isika. Ny olom-pirenena tsirairay dia tsy maintsy mitafy azy eny amin'ny arabe, amin'ny valan-javaboary na rehefa manao asa fanatanjahan-tena. Ankoatr'izay, amin'ny magazay sy fivarotana lehibe dia tsy maintsy atao ihany koa izy io.
Samy manana sarisaron-tava isika ao an-trano ary efa anisany amin'ny fiainantsika izy ireo. Ny fonon-tanana sy ny gel fanadiovana dia nanjary vokatra ilaina amin'ity toe-javatra miavaka ity. Azo alefa daholo ary misy fisalasalana maro rehefa mametraka ao anaty kaontenera samihafa. Araka ny efa nolazainay teo dia tsy maintsy apetrakao ireo sarontava kaontenera volondavenona ary ny tanjon'izy ireo dia ny fanariam-pako na fandringanana. Miankina amin'ny toerana misy antsika ary raha misy mpandoro fako na tsia, dia azontsika atao ny mampiasa ny saron-tava ampiasaina hiteraka angovo na hitahirizana azy.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fampahafantarana ny vahoaka fa tsy tokony hatsipy eny an'arabe na handoto ny tontolo iainana amin'ny fanipazana azy ireo any an-tsaha. Efa noresahintsika teo aloha fa ny viriosy sasany dia afaka manararaotra ny habetsahan'ny fako napetraka eny an-tsaha hanaparitahana sy hanitarana ny faritanin'izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy raisina fa ny sarontava dia araraka ao anaty fitoeram-birao.
Fonon-tanana sy gel famonoana otrikaretina
Ny fonon-tànana dia vita amin'ny lateks na nitrile ary ny olom-pirenena sasany dia mampiasa azy ireo amin'ny fiantsenana. Tsy tokony hapetraka ao anaty kaontenera mavo mihitsy izy ireo ary tokony hapetraka koa ny fitoeran-javatra maloto. Raha misy gel sy vokatra famonoana otrikaretina hafa dia atsipy ao anaty kaontenera fitoera-mavo izy ireo satria tsaboina toy ny vokatra fanadiovana hafa.
Araka ny hitanao, ity areti-mandringana ity dia niteraka fako be dia be izay tsy maintsy fantatsika ny fomba hamerenany ny laoniny. Ny fahalalana ny fanariana ny saron-tava dia lakilen'ny fikarakarana ny tontolo iainantsika na an-tanàna na amin'ny natiora.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra momba ny manipy ny saron-tava sy ny zavatra atao amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Izay atsipy ny sarontava